एथेन्स - के हेर्न र के गर्नु पर्ने ग्रीसको राजधानीमा Absolut यात्रा
एथेन्स ग्रीसको राजधानी हो र त्यो देशको सब भन्दा ठूलो शहरहरू मध्ये एक हो। 3000००० बर्ष भन्दा बढी इतिहासको साथ, हामी स्पष्ट छौं कि यो भ्रमणको लागि आउँदा यसको विस्तृत प्रस्ताव छ। यसको सब भन्दा प्रतीकात्मक स्थानहरू मध्ये एक्रोपोलिस हो, जसमा पार्टेनन पनि यसको एक प्रमुख पात्रको रूपमा समावेश छ।
यद्यपि यो त्यहाँ पनि छ जहाँ हामी Dionysus को थिएटर, एथेना मन्दिर वा Erechtheion पाउनुहुनेछ। यसका विचारहरू र यसको पुरातात्विक अवशेषहरूले तपाईंलाई चकित पार्नेछ। यसको खुट्टामा, हामी एउटा सबैभन्दा प्रसिद्ध छिमेकहरू भेट्दछौं जो प्लाका हो, साँघुरो सडकहरूको साथ। अवश्य पनि, यदि तपाइँ राम्रो विचारहरूको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ, लाइकाबेटो दृष्टिकोण जस्तो केहि पनि छैन।
ज़ीउसको मन्दिरले तपाईंलाई यसको उत्तम समयमा फर्काईउनेछ, धन्यवाद १ the-मिटर स्तम्भहरू जुन यो अझै संरक्षित छ। यो प्राचीन एगोरा के होईन भनेर होईन, तर तपाई अझै केही भवनहरू जस्तै हेफेस्टसको मन्दिर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईं रोमन एगोरालाई बिर्सनुहुन्न, जुन अझै आयताकार आकारको वर्ग हो र अझै केही बाँकी रहेको छ भने टावर अफ द होन्डस वा एथेनाको ढोका जुन एथेन्समा जाँदा हाम्रो ध्यान पाउन योग्य छ।
द्वारा मारुउजेन बनाउँछ5महिना .
ग्रीस समुद्र तट, ग्रीष्म ,तु, रमाइलो छुट्टीहरू वा पुरातात्विक भग्नावशेषहरूको बीच पैदल समानार्थी हो। सामान्य कुरा थाहा पाउनु हो ...
द्वारा दानियल बनाउँछ9महिना .
एथेन्सको एक्रोपोलिस ग्रीसको राजधानी को महान प्रतिमा र गौरव को प्रतीक हो ...
द्वारा लुइस मार्टिनो बनाउँछ9महिना .
मोनास्तिराकी, एथेन्सको फ्ली मार्केट, जिज्ञासुसंग यी पेस्की परजीवीहरूसँग केही गर्नुपर्दैन। यो नाम प्राप्त गर्दछ किनकि ...
कथा At एथेन्सको संरक्षक of
एथेन्सको संरक्षकको दन्त्यकथा, त्यस शहरका अन्य धेरै चीजहरू जस्तै ग्रीक पौराणिक कथामा यसको उत्पत्ति भएको छ ...।
प्राचीन ग्रीसको वर्णमाला र लेखन
पुरानो ग्रीसको वर्णमाला र लेखन फोनिसियनहरूले बनाएका हुन्। यी, बाट उत्पन्न ...
एथेन्स को अर्थव्यवस्था
द्वारा Absolut एथेन्स बनाउँछ5वर्ष .
एथेन्स ग्रीसमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनको केन्द्र हो। एथेन्सको समूहले सँगै ठूलो ...
धार्मिक स्मारकहरू र एथेन्सको चर्चहरू
११ औं र १२ औं शताब्दी एथेन्सको बाइजान्टिन कलाका लागि निर्णायक थियो। यी दुई शताब्दीहरूमा चर्चहरू फस्टाए ...
ग्रीस को विज्ञान र दर्शन
पुरातन ग्रीकहरूले दर्शन र विज्ञानको बीचमा कुनै भिन्नता राखेनन्, न त विभिन्न विषयहरूमा जस्तै ...
धर्म र ग्रीक देवताहरु
पोसिडन, जेउसका भाइ, समुद्रको मात्र होइन भूकम्प र घोडाको पनि हेरचाह गर्छन्। योग्य…
ग्रीस मा सबै भन्दा सुन्दर ट्रेल्स
ग्रीसको यात्रा सबै पैदल यात्रा उत्साहीहरूको खुसी हुनेछ। असहज परिदृश्य, सानो चट्टानी ट्रेल्स ...
ग्रीस मा सबै भन्दा राम्रो सांस्कृतिक स्थानहरु
सबैलाई थाहा छ कि ग्रीस सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पुरानो स्थान हो र यो ...
समुद्री खाना र मासुको साथ एक डिस्क बनाउनको लागि बनाइएको विधि